Eatching saxan ahama ahama etching saxan madaxtooyada wiishka etching saxan - Shiinaha Foshan Hermes Steel
Saxan Etching ahama ahama etching saxan madaxtooyada wiishka etching saxan
Saxanka geedi socodka etching ahaanta waa hab ka mid ah kanaalada kiimikada ee dusha sare ee birta birta ah si loo burburiyo qaababka iyo qaababka kala duwan. Muraayadda 8K ee muraayadda ah ayaa loo isticmaalaa sida saxanka hoose, hawsha fiiqitaanka ayaa la sameeyaa. Dusha sare ee shayga ayaa sii shaqeynaya. Midabka saxanka xarkaha birta ahaanta leh waxaa lagu farsameyn karaa habab kala duwan oo isku dhafan sida qaabeynta qeyb ahaan, sawir qaadis, duubis dahabi ah, iyo dahab qayb ka kooban titanium Midabka saxanka xarkaha ah ee birta ah ee aan lahayn ahaanta Xaqiiji saameynta qaababka dhalaalaya iyo kuwa madow iyo midabada dhalaalaya.
Nidaamka socodka waa:
Saxanka biraha ah ee aan xarka lahayn re hoos udhaca → maydhashada → qalajinta printing daabacaadda shaashadda qallajinta immers biyo ku shuba → qotomiska caleen midig (xaashida) maydhashada → qashin saarida caleemaha (go'yaal) iyo qalalan → kormeer → alaabta.
Taarikada Etching waxaa badanaa loo isticmaalaa qurxinta gawaarida wiishka iyo daboolka albaabka wiishka, kumbuyuutarrada gawaarida wiishka, baararka baabuurta, darbiyada derbiga hoolka, taariikhda, saqafka, qurxinta dhismaha, tabeeleyaasha hoteelada, hudheelada, goobaha madadaalada, dukaamada sumadda sare, iyo dhismayaasha dhaadheer. Sug